Sifada Salaadda Nabiga ﷺ | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Sifada Salaadda Nabiga ﷺ
Sifada Salaadda Nabiga
06/06/2014 Sifada Salaadda Nabiga ﷺCabdulCasiis Xasan Yacquubmaamule
Ahmiyadda salaadda iyo meeqaankeeda
Waqtiyada salaadaha faralka ah
Waqtiyada aan la tukan karin (meydkana aanay bannaaneyn in la aaso)
Waqtiyada reebban in la tukado salaad sunno ah
Inta rakcadood ay salaaddu ka koobanto
Ujeeddada qarsoon ee salaadda
Aadaan – lqaamah
Qusul (Qubeyska lays faray)
Xaydka (Dhiigga caadada dumarka ah)
Dhiigga dhalmada (Nifaas)
Hab tukashadii Nabi Muxammad (S.C.W.) iyo Sifadii salaaddiisa
Ducooyinka iyo wardiyada lala yimaado marka laga baxo salaadaha faralka ah oo la salaamo naqsado
Qavbaha iyo xubnaha Salaadda iyo xukunnadooda kaladuwan
Tiirarka Salaadda ay la’aantood salaadi ansaxeyn
Waxyaabo aan ku habbooneyn Salaadda oo karaahiya ah
Waxyaabaha buriya Salaadda
Waxyaabo ku habboon inaad la timaaddo marka aad tukanaysid
Waxyaalaha kuu bannaan ee aad ku sameyn karto salaadda gudaheeda
Salaadda Janaazada (sida loogu tukado qofkii muslim ahoo dhinta iyo habkeeda)
Mas’alooyin iyo weydiimo ku saabsan dahaarada iyo salaadda ruuxa buka ama dhaawaca ah
Salaadda qofka safarka ah
Ammaan iyo Mahad idilkeed waxaa iska leh Allaah, Naxariistaha, Naxariista Badan, Caadilka, Falka San. Kaa oo siiya Galladda iyo Naxariistiisa kii kastoo adeeca, una Carooda oo Ciqaaba kii kastoo caasiya, waa Deeqtoonaha Awoodda Badan ee loo Baahanaha ah la muto, Mahad iyo Ammaan idilkeed Isagaa leh Ilutnaa oo Weynaaye. Isaga wceyaan Kan dadka kala saaraya ee xukunka leh. maamulka iyo mulkiga iyo iyo amarka iyo ahaal marinta. Waana Isaga Kan aan u noqoneyno.
Waxaan qirayaa oo ka marag kacayaa inuusan jirin llaah xaq ah Allaah maahee. Waa Isaga Kan u xilsaaray muslimiinta waajibka shanta salaadood ee faralka ah. oo ka soo faray toddobada sama ¬korkooda inay dhowraan salaadda.
“Dhowra salaadaha iyo salaadda dhexe oo istaaga Allaah horti idinkoo adeecsan.” Suuradda Al-Baqara: Aayadda 238
Waxaan qirayaa oo ka marag kacaya oo kale in Muxammad yahay Rasuulkii Ilaahay. kan u wanaagsanaa caabudayaasha, iimaamka inta Ilaahay ka cabsata. sayyidka mursaliinta Ilaahay soo diray. Intaa kaddib:
Kani waa kitaab kooban oo ka hadlaya Salaadda waxaan qoray markii aan arkay baahida deg degga ah ee loo qabo. Waxaan ka arkay jaceyl iyo dadaal lagu farxo oo ammaan mudan rag iyo dumar wiilal iyo gabdho, oo ila soo xiriiray, oo jaceyl u hayo barashada diiinta xaqa ah, Islaamka, Risaaladii iyo Fartiintii u dambeysay ee ka timaadda xagga Ilaahay. Kuwaa oo baahi u qaba inay gutaan waajibyada iyo xilalka Ilaahay saaray ay salaaddu u horreyso, salaadda oo ah tiir dhexaadka Islaamka.
Salaadda uu Allaah ka yeelay calaamadda lagu kala saaro gaalka iyo muslimka.
Runtii, dad badan baa waxay jecel yihiin inay u laabtaan Rabbigood. gutaanna waajibka iyo xilalka uu saaray ay Salaadda ugu horreyso. ha yeeshee ay ka hor joogto jahli iyo aqoon la’aan la xiriirta sida u wanaagsan ee lagu gudan karo.
Dad badan baa ka xishoonaya inay arrintaa soo bandhigaan. maxaa yeelay marka uu ninka naftiisa fiiriyo, wuxuu arkayaa inuu da’ gaaray, ku hormaray aqoonta Aadmigu gaareen, jago iyo darajo sare ka gaaray arrimaha adduunka, oo dadka qaar inay kuunyadaan laga yaabo, ha yeeshee aan gudan karin aqoon wacanna u laheyn Salaadda, oo ah arrin xitaa ilmaha yar ec muslimiinta ah laga rabo inay u leeyihiin aqoon fiican oo dhan, odayaasha iyo waayeelka ka sokow.
Jahliga ummada ka heysata arrimaha diintooda waa mas’uuliyad iyo arrin la weydiin doono qof kasta oo cilmi leh, awoodna u leh inuu ka qayb qaato ka saaridda dadka mugdiga jahliga.
Arrintan waxaan xusayaa anigoo ka xun, kaddib kolkaan arkay dad badan oo Soomaali ah aan warba ka heyn arrimo badan oo diinta nolosheenna ah la xiriirta.
Waana taa waxa igu dcdejiyey inaan qoro kitaabkan kooban si ay dadku faa‘ido uga helaan Idanka llaahay
Maadaamayna qof kasta oo muslim ah ay muhiim u tahay shanta salaadood ee faralka ah. Salaadda jamaacada. Salaadda Jumcaha, Salaadda Labada Ciidood, Salaadda Istikhaarada (Laba talo tii roon), Salaadda Cabsida, Salaadda Janaazada (sida loogu tukado meydka), Salaadda Musaafirka. Salaadda qofka buka, iyo mas’alooyin kala duwan oo salaadda la xiriira. waxaan ku soo arooriyey arrimahaa oo dhan kitaabkan.
Waxaan ugu daray arrimahaa oo idil anigoo rajeynaya in laga faa’ideysto.
Waxaan ku dadaalay inaan isticmaalo ereyo sahlan si dhallinyarada, odayaasha, kii wax bartay, kaan wax baran ay isku si uga wada faa’ideystaan kitaabka. Kuwaa tukada waxay ugu faa’ideysan karaan inay saxaan wixii khalad kaga jira saladdooda. Kuwa aan tukanna inay ka bartaan oo sidaa salaadda ku oogaan. Waxaan Allaah ka baryayaa inuu ka dhigo camalkayaga mid khaalis u ah Wajigiisa, iyo camal Dar llaahay ah, oo ay ku intifaacaan dadka Soomaaliyeed meel iyo waa ay joogaanba Alloow dambigeenna dhaaf, innagana dhig hanuunsanayaal wax hanuunsha Naguna sug Xaqa ilaa geerida.
Waana Allaah Rabbigay, Mudanahayga iyo Gargaaraheyga, isagaana u wanaagsan id la kaalmeysto oo la tala saarto.
Allow nabad iyo naxariis korkiisa ka yeel Nabigeenni Muxammad, ehelkiisa, asxaabtiisa, iyo intii xaqa ku raacda. Aamiin.
Salaaddu waa tiirka Islaamka uu ku taagan yahay iyo udub dhexaadka diinta. Salaad la’aanina waa diin la’aan.
Diimahii hore salaaddu waxay ahayd qaybta ugu muhimsan cibaadooyinka ay Rususha iyo intii raacday aad ugu dadaali jireen
Nabi Ibraahiim nabad iyo naxariiis Alle dushiisa ha ahaatee wuxuu Allaah ka baryi jirey inuu gacan ku siiyo gudashada waajibka salaadda oo wuxuu ku duceysan jiray sida Qur’aanka ku soo arooray:
“Rabbigayow! Iga yecl mid u ooga salaadda si wanaagsan, aniga iyo durriyadeydaba.” Suuradda Ibraahiim; Aayadda 40.
Nabi Ciise nabad iyo naxariis Alle korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri, isagoo Rabbigi wuxuu kula dardaarmay ka warramaya:
“Oo Wuxuu igu farad yeelay salaadda iyo Zakada inta aan noolahay.” Suuradda Maryam; Aayadda 31.
Sidoo kale, Allaah wuxuu amray Nabi Muxammad nabad iyo naxariis Alle korkiisa ha ahaatee oo uu ku yiri;
Akhri waxaa laguu waxyoodo oo ka mid ah Kitaabka oo u oog salaadda si wanaagsan « Suuradda Al-Cankabuut 45aad
Islaamkana oo ah qaabkii iyo heerkii u dambeeyey ee lagu gunaanaday iyadoo ebyan diinta towxiidka, waxay salaadda ku tahay tiirka labaad (yacni ashahaadada Islaamka lagu soo galo kaddib).
“Qofkii salaadda ka tagaana waa qof gaaloobay.”
Waxaana loo baahan yahay in la ogaado in toosinta hannaanka salaadda ay tahay waxay diinta ina farto goor waliba.
Qur’aanka inama faro oo inama yiraahdo ‘salluu – tukada’ ee wuxuu ina faraa oo innagu yiraahda: ‘Aqiimuus salaah – ooga oo toosiya hannaaanka salaadda’.
Salaaddu ma aha erayo iyo dhaqdhaqaaqyo taxan oo waqtiyo iyo munaasabado gaar ah lala yimaado dhug la’aan, ee waxaa waajib ah in si kal iyo laab ah loo tukado haddii la doonayo inay soo saarto miro wanaagsan.
Salaadda waa in la guto waqtiyadii loogu tala galay iyadoo la oogaya shuruudaheeda. Waa in qof iyo bulshaba la wada oogaa oo ahmiyad weyn la siiyaa. Maxaa yeelay salaadda, marka loo guto qaabka iyo hannaanka wanaagsan ee loogu tala galay waxay ku xireysaa qofka iyo bulshadaba Allaah, miro iyo faa’ido badan bayna ka helayaan. Waxay qoyneysaa laabta qofka oo ku xiriirineysaa Rabbigi, xusuusineysaana maalintaa uu qofku hor istaagayo abuurahiisa iyadoon ay cidi u dhaxeyn.
Nabigu (S.C.W) wuxuu inoo sheegay in:
Waxaa ugu horreeya ee qofka lagala xisaabtami doono Qiyaamaha ay tahay salaadda. Hadday wanaagsaneyd, acmaashiisa kale oo idil ay wanaagsanaayaan, haddayse
xumeyd, acmaashiisa kalena sidaa bay u xumaanayaan. (waxaa wariyey ad-Dabaraani).
Salaaddu waxay aheyd waajibkii ugu horreeyey ee la amray mujtamaca muslimka ah towxiidka kaddib intay Makka joogeen. Seddex sano ka hor hijradii Rasuulka s.c.w. Madiina.
Waxaana dhab u muujinaya oo daliil cad u ah ahmiyadda salaadda iyo siday Allaah ugu weyn tahay inay salaaddu tahay cibaadada qura ee Rasuulka samada lagu soo faray habeenkii Israaga iyo Mijcraajka, halka cibaadooyinka iyo waajibaadki kale Rasuulka la soo faray isagoo dhulka jooga.
Salaaddu waa waajib iyo xil saaran qof kasta oo muslim ah, ee miyir iyo maan qaba, qaan gaarna ah.
Caa’isha AKR waxay tiri: Wuxuu yiri Rasuulki Alle:
“Qalinka waa laga qaaday (oo wax kama qoro) seddex: qofka hurdada la tagto intuu ka soo kacayo, ilmaha yar intay ka qaan gaarayaan, iyo qofka waalan, intuu miyirku iyo maanku ku soo noqonayo’. (Waxaa wariyey Al-Bukhaari iyo Muslim.)
Wixii seddexdaa la soo sheegay aan aheyn waa la weydiin xilki iyo waajibkii Allaah saaray siday u guteen. Waxaana xilalkaa iyo waajibaadkaa ugu horreeya salaadda.
Aayado badan ayaa muslimiinta faraya salaadda. Naxariistiisa badan awgeed Allaah hufnaa oo kor ahaaye wuxuu meelo badan oo Qur’aanka ka mid ah ku muujiyey, isagoo ku celcelinaya ahmiyadda iyo meeeqaanka salaadda Allaah Kor ahaaye wuxuu yiri:
“Dhowra salaadaha iyo salaadda dhexe oo istaaga Allaah horti idinkoo adeecsan ” Suuradda Al-Baqarah: Aayadda 238
Axaadista Rasuulka s.c.w. qaar ka mid ahi waxay daaha ka qaadeen inay ka mid tahay ujeedooyinka salaadda tirtiridda iyo dhaqidda dambiyada aan kabaa’irta aheyn.
Ujeeddo iyo xikmad kale oo salaadda ku jirtaa waa inay ku beerto damiirka qofka muslimka ah Alle ka cabsi oo uu qalbigiisu qoyo, ilays iimaani ahna uu yeesho iyo nuur.
Tanse ugu weyn oo ugu muhiimsan waa xuska Ilaahay, maadaamuu Isagu yahay Kan ay Gacantiisu ku jirto khayrka oo idil.
Allaah Kor ahaaye wuxuu yiri: Oo u oog Salaadda si wanaagsan. Xaqiiq, Salaaddu waxay ka reebtaa dadka xumaanta iyo Munkarka, oo xusidda Allaah baa sii weyn. Oo Allaah waa og yahay waxa aad sameynaysaan.” Suuradda al-Cankabuut: Aayadda 45.
Dhowridda salaaddu waa arrin aad inoo lagu adkeeyey – degaan haddaan nahay negan oo guryahoodii jooga, ama kolkaynu safar nahayba gooraha amniga iyo gooraha baqdinta. Gooraha nabadda iyo gooraha dagaalka. Haddaan caafimaad qabno iyo haddaan bukaan nahay. Xitaa haddaanu kari weyno inaynu ka soo wada baxno shuruudaha layska doonayo ee Salaadda iyo xaaladaheeda la yaqaan. sida weesada, qusliga, daahirinta maryaha, iyo meesha lagu tukanayo, arrimahaa haddii ay adkaadaan ama la waayo waxaa naloo banneeyey inaynu ka tagno, oo iska deyno, ama wax kale ku beddelanno kolkey duruufteeda timaaddo, sida booreysiga (oo ah isticmaalki carrada ama shay boor leh oo daahir ah si laysugu daahiriyo halkii biyaha).
Sidoo kale waxaa laynoo banneeyey gaabinta iyo isu keenidda salaadda waqtiga safarka. Marnabase uma bannaana oo cudur daar uma leh qofka muslimka ahi inuu fududeysto oo uusan ahmiyad siin salaadda ama dib dhigo illaa waqtigeeda ka baxo, oo keliya dumarka markay caadada ku dhacdo oo dhiig bileedkii helo ama dhiggii dhalmada ka socdo baan salaad tukaneyn xilligaa ay dhiigga qabaan. Xitaa qofka bukaan jiifka ah ee aad u xanuunsanaya ee aan socon karin ama qofka col iyo cadow ay is hayaan waxaa waajib ku ah inuu tukado. Qofku hadduu si kale oo dhan u tukan waayo oo cudur ama wax kale dhigaan oo dhaqaaq iyo dhawaaq iska waayo, wuxuu ka tukan indhahiisa ama qalbigiisa hadba inta awooddiisa gaarsiiso, inta uu wax kala garanayo, miyirkiisuna uu taam yahay maankiisana joogo salaad waa laga rabaa.
Kolkay Rasuulka s.c.w. nafta ka sii baxeysay, naxariis iyo turid uu ummadiisa u qabo. wuxuu ku celcelinayay oo lahaa: War hooy Salaadda. War hooy Salaadda.
Waxayna Rasuulka s.c.w. nafti ka baxday isagoo leh: Assalaah Assalaah . Salaadda .. Salaadda”
Axaadiis saxiix ah oo ka sugnaaday Nabiga (S.C.W.) ayaa caddeynaya in ka tegidda Salaadda ay kufri tahay iyo gaalnimo, qofkiisa uu ku muteysanayo cadaabta Ilaahay nolosha dambe ee Aakhirada. Axaadiista sheegaya gaalnimada taariku salaadka waxaa ka mid ah xadiiska ah:
“Waxaa qofka ka xiga kufriga iyo shirkiga ka tegidda Salaadda” (Waxaa wariyay Axmad iyo Muslim).
Wuxuu kaloo Nabigu (S.C.W.) yiri:
“Ballanteennu waa salaadda. qofkii ka tagaana waa qof gaaloobay”. (Waxaa wariyay Al-Bukhaari iyo Muslim).
Asxaabtii Rasuulka Alle ha ka wada raalli noqdee waxay qabeen in haddii hal salaad kas iyo maag laysaga daayo oo looga tago ilaa waqtigceda ka baxo inay tahay ka noqosho diinta iyo ku gaaloobid Alle weyne.
Sidiisana waxaa yiri Cumar bin Al-Khaddab Cabdulaah bin Mascuud, Cabdullaah bin Cabbaas, Mucaad bin Jabal iyo rag badan oo asxaabta ka mid ah iyo taabiciin waaweyn.
Cid asxaabta ka mid ah oo taa kula dooddayna ma jirin ama hadal ka keentay oo waxay aheyd arrin ay isku waafaqsan yihiin.
Qofkii aan war heyn, Islaamkana aan wax looga sheegin ee jaahilka ka ah, xil iyo mas’uuliyad ma saarna inta wax looga sheegavo oo la ogeysiin. Ha yeeshee kolkuu ogaado inay salaadda waajib ku tahay iyo xil saaran, marba haddii uu Muslim yahay, xujo iyo cudur daar, iyo dow uma leh inuu ka tago.
Shiikhii Islaamka Axmad ibnu Taymiyah wuxuu yiri:
“Dad waxaa jiri marna salaadda tukada, marna ka taga, oo sidaa marna kufri ku sugan, marna iimaan, arrintooduna waa hadba sida khaatimadoodu noqoto”
Waana kuwan marna salaadda tukada, marna ka taga kuwa cadaabta loogu gooddiyey falkoodaas xun awgii, waana iyaga kuwa uu ka hadlayo xadiiska Cubaadah ee sheegaya in Rasuulku (S.C.W.) yiri:
Shan salaadood buu Allaah ku waajibiyey addomihiisa maalinta iyo habeenka. Qofkii dhowraa ee muwaxid shirki ka fayow wuxuu Allaah u ballan qaaday inuu jannada geliyo, qofkii aan dhowrin salaadda cahdi iyo ballan Alle agtiisa uma taal. Hadduu doono wuu ciqaabi, hadduu doonana wuu iska cafin.”
Sidaa awgeed dhowraha salaadda waa kan tukada waqtigii uu Allaah u qabtay oo aan ka dib dhigin waqtigeeda loo dhigay dayicinna qaybaheeda muhiimka ah. Qofkase aan toosineyn salaadda ee kala gaabinaya, inkastoo uu tukanayo qofkaas Allaah baa go’aankiisa leh, waxaana suura gal ah inuu leeyahay salaado siyaado ah oo dheeri ah (Nawaafil) si loogu kabo salaadahiisa faralka ah, tixraac qowlka Rasuulka SCW
“Waxa ugu horreeya ee addoomaha laga eegi doono kolka la xisaabinayo waa salaadda. Rabbigeen wuxuu ku oran doonaa malaa’igta isagoo ogsoon oo kaga cilmi roon: Bal fiiriya addoonkeyga salaadiisa miyuu dhammeystiray oo si wacan u gutay mise waa uu kala dhimay? Markaa haddii ay dhan tahay waxaa loo diiwaan geliyaa iyadoo dhan, haddayse dhiman tahay wuxuu oran, bal fiiriya hadduu addoonkeygu sunnooyin tukan jirey? Haddii uu salaado dheeri ah oo iskiis ah tukan jiray aan shanta faralka aheyn, wuxuu Allaah oran, uga kaba addoonkeyga salaadahiisa faralka ah salaadahiisa sunnada ah, kaddib acmaashiisa kale oo dhan waxay ku xiran tahay natiijada salaaddiisa”. Oo hadduu salaadda ku dhaco waxa kale oo dhan wuu ku dhici doonaa, haddii uu salaadda ku baasana waxa kale oo dhanna wuu ku baasi (yacni ka gudbi oo ku guuleysan) Qofna cudur daar uma leh inuu salaadda ka tago ama dayaco Ruuxii sidaa yeelaa naftiisa buu gef iyo dulmi u geystay. Sidaynu soo sheegnayna kooxo asxaabta Nabiga s.c.w ka mid ah waxay qabeen ruuxii kas uga tagaa hal salaad ilaa waqtigeedu uu ka baxo ay tahay gaalnimo, ciqaadta ka taal ay tahay dil. Cid asxaabta ka mid oo aragti taa ka duwan qabtayna ma jirin. Waxaa isweydiin leh haddaba dadka Muslim baan nahay leh ee haddana aan tukaneyn ma waxay soo galayaan kuwaa ogsoon weynida salaadda iyo meeqaankeeda iyo in qofkii ka tagaa salaadda xukunkiisa adduunka yahay in la dilo illaa geeri, mise ma kuwa jaahil ah baa ee moog inay salaaddu waajib ku tahay iyo in kale? Ma waxaan jahli ahayn baa dambigaa weyn oo kale loogu dhici karaa? Dhinaca kale, ma suura gal baa in jahligu sidaa daran uu u faafo?
Maxaase ku kallifi karo qof inuu ka haro kulanka musalliinta oo uu ka goosto xiriirka Alle weyne ee galladda iyo abaalka iyo deeqda badan, naxariis badnaha falka san?
Alle weyne isagoo aadmiga waaninaya wuxuu yiri:
“Aadanow! Maxaa kaa jeediyay Rabbigaaga, Roonaanta badan? Ee ku abuuray kuna ekeeyey oo kuu simay si wanaagsan. Oo suurad tii uu doonay kaa rakibay.” Suuradda al-Infidaar, aayadaha 6aad-8aad.